watchOS 3.2.3 uye tvOS 10.2.2 inowanikwawo kurodha pasi | Ndinobva mac
watchOS 3.2.3 uye tvOS 10.2.2 inowanikwawo kurodha pasi
Masikati ekuvandudzwa uye ndeyekuti mushure mekumisikidza kuisa yazvino vhezheni yeMacOS Sierra 10.12.6, ikozvino isu tinofanirwa kugadzirisa iyo Apple Watch uye yechina chizvarwa Apple TV, ese atowanikwa kuvashandisi vese.
Pachokwadi hapana shanduko dzakawandisa kuti usataure chinhu nezve yazvino beta vhezheni yakaburitswa nevakomana kubva kuCupertino, asi sekune iyo macOS Sierra vhezheni iwe unofanirwa kugadzirisa nekukurumidza sezvinobvira kuti uve neiyo kugadzirisa mukugadzikana kwesisitimu uye kuita.
Mune ino kesi isu takatarisana yepamutemo watchOS 3.2.3 uye tvOS 10.2.2, mavhezheni maviri epamberi kusati kwatanga mavhezheni akamirirwa nevashandisi vese (zvirinani mune yeOSOS) neWatchOS 4. PaApple TV, kunyangwe chiri chokwadi kuti hapana shanduko huru dzinowedzerwa zvichienzaniswa neshanduro yazvino, chete Nekuvandudza uko kuchawedzerwa kwekutonga kweAirPods, vazhinji vedu tichafara.
Muchidimbu, shanduro dzekupedzisira dzevashandisi veApple Watch uye Apple TV. Kune avo vanofanirwa kugadzirisa Apple Watch, yeuka kuti inofanirwa kuve ne50% bhatiri mumudziyo, ive pane charger uye uve neyechangoburwa vhezheni yeIOS yakaiswa pane iyo iPhone, iri mune ino kesi iri iOS 10.3.3. Kana izvi zvangoitwa uye ne backup kana chero dambudziko rikaitika mukumisikidza, isu tinongowana iyo iPhone Watch application, tinya pane General uye Software Kwidziridza. Kana pasina munhu aitarisira kuve neshanduro nyowani svondo rino, Apple inoenda ndokuburitsa mafainari emunhu wese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » watchOS 3.2.3 uye tvOS 10.2.2 inowanikwawo kurodha pasi
Flycut, iyo application inokutendera kuti uve nezvose zvaunoteedzera paruoko
MacOS Sierra 10.12.6 yave kuwanikwa kune vese vashandisi